Ny olona any amin'ny helo | Apg29
Tohin'ny ka jereo ny tsara vita sarimihetsika momba an'i Jesosy 'tantara ny lehilahy manan-karena sy i Lazarosy. Ny tantara dia tsy misy fampitahana. Tena nahatsapa izany.
Ary nony maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama. Ary ny manan-karena koa ny maty dia nalevina. Ary any amin'ny afobe, izay mby tao an fijaliana, dia nanopy ny masony izy ka nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-ilany.
Nisy lehilahy manan-karena izay niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sy niaina isan'andro amin'ny fahafinaretana sy ny lafo vidy. Ary nisy kosa izay olona malahelo anankiray atao hoe Lazarosy, feno fery nandry teo an-baravarana, ka te hanome fahafaham-po ny hanoanana sy ny hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay manan-karena. Ary ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny.
Dia hoy Abrahama: Anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoa, ​​raha mbola velona ianao, ary toy izany koa Lazarosy nahazo ny ratsy. Fa ankehitriny izy no ampifalinay, ary ianao fadiranovana. Ary ankoatra izany rehetra izany, misy hantsana lalina lehibe ho amintsika roa tonta, fa ireo izay te-hahazo avy eto aminao tsy mba ho any sy ny olona avy tany na ho afaka ny ho tonga eo amintsika.
Ary hoy izy: Dia manontany anareo ny Ray, mba hanirahany azy ho any an-tranon'ny raiko, fa manana rahalahy dimy aho, ka mba hampitandrina azy, fandrao tonga izy ireo ihany koa ho amin'ity tanàna ity ny fijaliana. Ary hoy Abrahama taminy: Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany. Taminy izy, dia mihaino.
Ary hoy izy: Tsia, Abrahama, raiko; fa raha misy olona mandeha ho azy ireo avy any amin'ny maty, dia hibebaka izy. Dia hoy izy taminy: Raha tsy mihaino an'i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy ho resy lahatra na dia misy mitsangana amin'ny maty.
Lioka 16: 19-31